Isifiso wonge imali yabo kanzima - lokhu iyisici unakho kungokwemvelo futhi siyakuqonda ngoba izakhamuzi zaseRussia, futhi omkhulu Abasebenzisa-Americans noma baseYurophu niggardly. Kodwa ngesikhathi esifanayo, wonke umuntu ufuna ukuba adle kahle, ingubo kanye nokuphumula. Hlanganisa ibhizinisi ubumnandi, ukuthi akufanele abahileleka kunoma yiluphi ngokuningiliziwe, kodwa ungadikibali cash in izidingo zabo zobuqili nabathengisi ulula, uma wazi izimiso jikelele emnothweni.
Kubalulekile kakhulu ukuthenga izinto ezinhle akuzona overpriced, kodwa ngentengo yabo yangempela. Ihlanganisa mthetho empilweni uthola uma wazi ukuthi ungayiqala nini yokuthengisa ebusika futhi esingakanani zokugcina. "Kungani ebusika, hhayi kunoma yimuphi omunye inkathi?" - cela i shopaholic ongenalwazi. Iqiniso lokuthi kwaba phezu abandayo isizini ukuwa amaholide kangaka futhi ezibalulekile ezifana Christmas and New Year, futhi wonke umuntu ucabanga kufanele silungiselele lokhu ukugubha ezibalulekile. Ukuthenga izipho nezihlobo, nabangane ekubuyekezeni ikhabethe izinto eziwubukhazikhazi, noma umane ukuthenga ezibizayo ebusika izingubo - njalo umsebenzi ebizayo, ngakho-ke kungcono ukwazi ngokuqinisekile lapho yokuthengisa ebusika uqale. E-Moscow, Petersburg, izihloko kanye emadolobheni amakhulu aseYurophu, e-USA, Japan kanye ne-United Arab Emirates has uhlelo ayo ukuheha abathengi, abe imithetho ehlukene kanye nosuku amasheya, ngakho enengqondo pre-ukudayiswa amalungiselelo.
Isikhathi ekahle yezitolo
Statisticians ukubika ukuthi esikhathini esifushane yesikhathi ngaphambi Year New and Christmas kaKhisimusi, abantu bachithe kathathu imali ngaphezu kwanoma isiphi esinye isikhathi sonyaka. Asikho isidingo ukuchaza kungani lokhu kwenziwa ngu ikhasimende, kodwa hhayi wonke umuntu uqonda kahle ukuthi kungani ezitolo uyavumelana ahlele a mega-Salem, ngoba uma uqala yokuthengisa Ebusika, abanye boutiques, chain izitolo kanye zezitolo akhale amakhasimende isigamu intengo yezimpahla.
Iqiniso lokuthi umthengi noma kunjalo uzokwenza ukuthenga, kanye nabathengisi kubalulekile ukulidonsa ncamashi waso ukudayiswa futhi akavumeli nilambatha. Aya amaqhinga ahlukahlukene: anikele izipho, izaphulelo, amabhonasi kanye nezinzuzo (isinxephezelo yezindleko zesikhathi esizayo, izitifiketi isipho umlingani izitolo, ukuzijabulisa izindawo, ikhono lokuthenga amayunithi amaningi ukuthengiswa intengo ehlisiwe, njll ...).
Winter ukukhushulwa, yokuthengisa, namanye amacebo ukuheha abathengi uyazi ngempela akukho imingcele. Nokho, umthengi uyoba ukuqapha eduze neqiniso lokuthi wayeseholela bazame ukuphoqelela consultants yokuthengisa, ngoba ngokuvamile kakhulu "isipho" kuyinto eqanjiwe, noma awulona kuwufanele imali ngokuthenga.
Ngosuku lokuqala izaphulelo ebusika kufika ekupheleni ekwindla, kodwa kumelwe uqaphele ukuthi lolu suku rasprodazhny - isenzakalo esibaluleke kunazo zonke onyakeni ukuze shopaholic yangempela. Igama lakhe - "Black Friday". Isiko ukuhlela a mega-Rabat ngoLwesihlanu olwedlule, Novemba umsuka e-United States. Ngalolu suku, abathengi ukugqashuka izitolo, ngokuthatha emgqeni ikhilomitha ebusuku futhi ngokoqobo ashanele nge ukuveza konke kuza izandla zabo phezu. Ngoba kufike umuntu mumbe ngempelasonto nabathengisi ukuthola ukuqhutshwa alinganayo cishe ingxenye yesine kwabaneminyaka imali yonyaka. impumelelo enjalo lomcimbi utshelwa iziphathimandla kwamanye amazwe ngokudalwa zakhe "usuku enkulu yokuthengisa." Ngakho, ukunweba umsebenzi walo amahora 2-3, ngakho abathengi ungase zijabulela ukuchitha imali ukulondolozwa i ngonyaka e-London ngo-December 2 ihlanganisa ukuhamba izimoto endaweni we West End, izitolo 600. Ikhaya Paris ukudayiswa senzeka ngobusuku 18 kuya 19 Januwari.
Lapho yokuthengisa isiqalo ebusika, esizinikezele 'Black Friday "awabona ngempela mathupha khona ababethi bemitshingo egcwele izivakashi eziyinxanxathela. Umkhuba wokulala eminyakeni yamuva - ukuthenga nge-Internet. Ikhono lokwenza zigqila ngaphandle kokushiya ethokomele ingalo-isihlalo, hhayi kuphela ngaphakathi ezweni kodwa futhi phesheya, kanye inzuzo enkulu edonsela abathengi kusukela emhlabeni wonke. Ngaphezu izaphulelo, izitolo inthanethi ukhuthaze amakhasimende ukulethwa khulula, ukungabi imisebenzi ku amaqembu athile kwezimpahla kanye nekhono ukubuyela noma ukushintshanisa i izimpahla lungafanelekile noma non-liquid.
Growing okungaphezu kweminyaka yakhe
Winter izaphulelo ezihilelekile kaningi ne eyishumi nanye kuZibandlela. Iqiniso liwukuthi eYurophu nase-United States isenzakalo esibaluleke nakakhulu UKhisimusi eNtshonalanga ukugubha Disemba 24 futhi kwaba salokhu iholide isinqumo ukulungiselela wemfanelo kakhulu. Sekusele amasonto amabili kube umcimbi Izitolo ezibalulekile hang izikhangiso bakwazi ukunikeza amakhasimende abo isaphulelo 10-15%. I asondeze amaholide, ebaluleke kakhudlwana iba bazuze ukuthengwa. Ngakho, ngosuku olwandulela iSonto Christmas amanani phansi 25-30%.
Ngemva kufike uNyaka Omusha, ukuba ngqo Januwari 7-10, uqale imvume ukudayiswa, futhi isikhathi eside kuze kube Usuku luka-Valentine. izaphulelo Peak kungaba lokususa 80-90% ohlwini intengo. Kumele kukhunjulwe ukuthi lapho Rabat ifinyelela alolu, thola izicathulo esitolo noma izingubo, ubukhulu kwesokudla, ukwenza-up noma amakha brand ethandwa kakhulu nezinhlobo cishe akunakwenzeka. Lapho ebusika iqala ukudayiswa izingubo, izicathulo, ubucwebe kanye izesekeli (maphakathi no-January), izimpahla ngokushesha okukhulu siyahluka endleleni emashalofini. Kodwa izimangaliso ziyenzeka, futhi kungani ungaziniki ithuba, elinde iziphakamiso zokugcina kusukela esitolo?
BaseMelika baziwa okusezingeni eliphezulu amandla abo wokuthenga kanye abanothando imali kabi izimali. Ngisho nalapho ingase ibe izimali siqu, izakhamuzi phesheya ungaboni yini okungalungile ngokuxoxa ukuthi izimpahla ukuthenga ngesikweletu.
Ukuhweba amanethiwekhi okugqugquzelwa lokhu abanothando shopogolizm, futhi eminye zishukumisa amakhasimende abo, baye wadala isimiso izaphulelo kanye ukukhushulwa, ngakho baseMelika singazi kuphela usuku lapho yokuthengisa ebusika uqale, kodwa nangaleso izinsuku ezithile - shopping enenzuzo kakhulu.
Usuku Martina Lyutera King;
Usuku oMongameli '.
Winter bargaining eYurophu
Mayelana lo mkhuba yezitolo izinkambo eNtshonalanga Yurophu, wezwa cishe zonke izakhamuzi zezwe lethu. Global ikhabethe buyekeza aphinde athenge Christmas izipho phesheya isivele sekuyinsakavukela abantu yeRussia. Lokhu akusona isimanga, ngoba lapho yokuthengisa ebusika uqale e Moscow, Milan, Paris, London Madrid kakade kuthengisiwe ububanzi ngonyaka odlule. Rabat yabo Imininingwane okwenzeka emhlabeni ngesikhathi esifanayo, futhi "ukuphila eshalofini" ayafana:
France esungulwe isikhathi yokuthengisa ezingeni olusemthethweni futhi akashintshi usuku - kusuka 6 Januwari kuya ku-February 16.
Italy - Januwari 7 - Februwari 28. Ukuthenga emadolobheni ahlukene yezwe ungajabulisa ngezindlela ezahlukahlukene, ngakho eMilan Bologna, ukuyothenga kuyoba ezibizayo kunokwenziwa eRoma.
Winter yokuthengisa eJalimane, elide (zonke December nango-January), iyipharadesi kubathandi izingubo ngesitayela abayitoho futhi izimpahla ukusetshenziswa nsuku zonke, umkhiqizo ezifana njalo amanani ezifanele, futhi leso sinqumo wehlukile kakhulu.
Azikho izindawo ezingadumile kakhulu bethenga izivakashi steel kanye namazwe aseMpumalanga Yurophu. Poland ukudayiswa Imininingwane siqala, ngemva kokuphothula imikhosi New Year, Lithuania - emva Christmas, "izinsuku obomvu" sokugcina izitolo kula mazwe ngaphambi kokuphela kuka-February.
ezingabizi kwethu zonke
Ngokungafani namasiko European noma American, Salem eRussia babe ukunambitheka yabo engokwengqondo, futhi ukunambitheka. Kusukela phakathi no-December, lapho yokuthengisa ebusika uqale Petersburg, eMoscow nakwamanye amadolobha enkulu yezwe, futhi ngaphambi kokuphela ikhalenda amakhasimende ebusika cishe ukuthola tags intengo nge lokususa izimpawu amaphesenti amahlanu noma ngaphezulu. Isikhathi evumayo kakhulu yezitolo kuyoba ngo-February, ngoba amaholide kaNcibijane sinqume ukuthi inwebe kuwo wonke Januwari, kanti izitolo ungafuni ukulahlekelwa usebenzela inzuzo yazo.
Ngeshwa, amakhasimende basekhaya oholela kangcono ukuya ukuthenga izinto uphawu phesheya futhi uthenge khona. Kodwa ngokuqondene mass emakethe, bafake abayitoho futhi izicathulo, mikhiqizo athengisa kakhulu ngokuzithandela okukhulu ngaphezu kwabo kusuka brand nge idumela emhlabeni wonke.
Kukhona kakade silahle kuze kube sekupheleni ubusika akudingekile bethenga kungcono uhambe ngokushesha ngemva Unyaka omusha, noma isikhundla egijima ngizoya esikhathini esidlule wena.
Ukuthenga ngaphandle kwemingcele
yezitolo Online eminyakeni yamuva buthola isivinini more and more. Ngisho abasebenzisi abangenalwazi okunethezeka inthanethi etholakalayo ukwenza ukuthenga phesheya. Lokhu kusiza izinhlangano ezikhethekile umlamuli. Ngaphezu kwalokho, abathengisi ezinkulu inthanethi ukunikeza izinsiza zabo kuhlanganise kubathengi Russian.
izitolo Virtual angaphansi izitayela global futhi uhlele Rabat ezingeni elifanayo njengoba boutiques bendabuko. Kufanele kuqashelwe ukuthi le amanani aphansi kakhulu, ngoba inhlangano ukuhweba Inthanethi - ibhizinisi ngaphansi ebizayo, than dalo esitolo langempela.
Isakhiwo ukuhwebelana phakathi kwamazwe.